Manao hetsika ‘Akanjo Manga’ ireo mpikatroka ao Myanmar mba hanehoana firaisankina amin’ireo gadra politika · Global Voices teny Malagasy
Mbola any am-ponja ny gadra politika maherin’ny 10.000
Voadika ny 28 Avrily 2022 4:41 GMT
Manao akanjo manga ireo mpikatroka manohitra ny fanonganam-panjakana ao Myanmar ho firaisankina amin'ireo gadra politika. Sary avy amin'ny The Irrawaddy. Nahazoana alalana.
Nanomboka nanao ny fanentanana maneran-tany “Akanjo Manga” hanehoana firaisankina amin'ireo gadra politika, indrindra ireo olona maherin'ny 10.000 nosamborina taorian’ ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana Febroary 2021 ny hery mpomba ny demokrasia ao Myanmar.
Nandrombaka ny fahefana ny miaramilan’i Myanmar taorian'ny niampangany ny antokon'ny fitondrana teo aloha ho nanao hosoka tamin'ny fifidianana. Nitondra an'i Myanmar nandritra ny am-polony taona maro ny miaramila mandra-pahazoan’ny governemanta sivily alalana hitondra ny governemanta tamin'ny taona 2012. Na dia teo aza ny fanavaozana, dia nanome antoka ny seza ao amin'ny Kabinetra sy ny Parlemanta ny miaramila. Resy tamin’ny fifidianana 2015 sy 2020 ny antoko tohanan’ny miaramila.
Notoherin’ny olom-pirenena hatrany am-boalohany naniry hamerina ny fitondrana sivily ny fanonganam-panjakana. Mba hampanginana ny mpanohitra, nampihatra famoretana tamin’ireo mpikatroka, mpanao gazety, mpanakanto, manam-pahaizana, ary ireo voampanga ho manohana ny mpanohitra ny fitondrana miaramila.
Namoaka gadra manodidina ny 1600 eo ho eo ny fitondrana miaramila tamin'ny famotsoran-keloka ho fanamarihana ny Taombaovao Birmana tamin'ny 17 Aprily, saingy tsy nisy gadra politika tamin'ireo navotsotra ireo.
Nanambara ny fanentanana tamin'ny 21 Aprily ny Fikambanana Fanampiana ho an'ny Gadra Politika ary nanasongadina ny fitomboan'ny isan'ny voafonja noho ny fanohizan'ny governemanta miaramila ny fitazonana ireo olona voampanga ho manohana ny Hetsika tsy Fankatoavana Sivily sy ny Governemantan'ny Firaisam-pirenena.
Herintaona mahery izay no nikasa naka ny fahefana tamin’ny fomba tsy ara-dalàna tamin’ny fanonganam-panjakana ny fitondrana miaramila. Nitohy nandritra ny herintaona mahery ny fanoheran’ny vahoaka, amin’ny fomba sy endriny maro. Gadra politika miisa 10.271, ny 996 amin'ireo no voaheloka raha miandry ny fitsarana ny 9.275, mbola voatazona tsy ara-dalàna nanomboka hatramin'ny Revolisiona Lohataona. Nitazona sy nampijaly ary nampigadra an’ireo mpanohitra ny vondrona mpampihorohoro, mba hahazoany fahefana.
Ny 21 aprily no nanamarihana ny faha-8 taona nahafatesan'ilay gadra politika teo aloha Win Tin, mpanao gazety malaza sady mpikambana mpanorina ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia, antokon'ny nahazo ny loka Nobel sady mpitarika Myanmar teo aloha Aung San Suu Kyi. Rehefa 19 taona an-tranomaizina, navotsotra tamin'ny taona 2008 i Win Tin, saingy mbola notohizany ny fanaovana fanamiana lobaka mangan’ny fonja ho firaisankina tamin'ireo gadra politika izay mbola tao am-ponja. Nivoady ny hanohy hitondra ny akanjo manga izy mandra-pamotsorana ireo gadra politika rehetra.
Sady fanomezam-boninahitra ny sorona nataon'i Win Tin sy ireo mpitarika mpomba ny demaokrasia hafa no antso maika atao amin'ny fianakaviambe iraisampirenena hanohy ny antso ho amin'ny famotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpikatroka manohitra ny fanonganam-panjakana ny fanentanana “Akanjo Manga”. Namerina io antso io i Wai Hnin Pwint Thon, tompon’andraikitry ny mpisolovava ao amin'ny Burma Campaign UK.
Nijoro tamim-pahasahiana nanohitra ny fanonganam-panjakana nataon’ny miaramila ireto mpikatroka ireto, saingy toa adinon’izao tontolo izao ny momba azy ireo. Tsy maintsy miteny ho an'ireo gadra politika ao Birmania ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary manao antso amin’ny famotsorana azy ireo tsy misy fepetra.
Mampiasa ny tenirohy #blueshirt4burma ny olon-tsotra sy ny vondrona ao anatiny sy ivelan'i Myanmar ho fanohanana ny fanentanana .
Nanatevin-daharana ny #BlueShirt4Burma tamin'ny fanaovana akanjo manga ny vahoaka revolisionera manerana an'i Myanmar hanehoana ny firaisankinany amin'ireo gadra politika rehetra izay notanana tsy ara-drariny tany am-ponja.
Ahitana fijoroana vavolombelona nataon'ireo gadra politika teo aloha ity andiam-panehoan-kevitra tao amin'ny Twitter ity
🗣️Any Birmania, gadra politika an'arivony no notazonin'ny fitondrana miaramila hatramin'ny fanonganam-panjakana.
Ny #21April, nitafy akanjo manga ny KHRG ho firaisankina amin'ireo mpanohana ny demokrasia rehetra voatazona tsy ara-dalàna.
Vakio ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo gadra politika 👇
Nanatevin-daharana ny fanentanana ireo mponina ao amin'ny tanànakely iray any Sagaing, izay maneho ny firongatry ny fanoherana any amin'ny faritra avaratrandrefan'ny firenena.
Fitokonan'ny fiaraha-mitantana revolisionera manohitra ny fanonganam-panjakana tao amin'ireo tanànakely avy ao amin'ny Distrikan'i Yinmabin any Sagaing mba hanamarihana ny faha-8 taona nahafatesan'ilay mpikatroka mafana fo mpanohana ny demaokrasia U Win Tin (Hanthawaddy).
Manatevin-daharana ny fanentanana ihany koa ireo mpanakanto. Mpanakanto iray tsy nitonona anarana nizara sary fanoharana ho fanohanana ireo voafonja:
Andron’ny #BlueShirt4Burma. Manao lakanjo manga aho amin'ny fiainana andavanandro. Satria tsy afaka mandefa ny sariko aho dia nanao sary kely. Sady manome voninahitra ireo efa nodimandry isika no tsy hijanona ihany koa raha tsy afaka ireo voafonja amim-pahadisoana.
Nisioka ny fanohanany ny masoivohon'ny Fanjakana Mitambatra, Frantsa, ary Etazonia. Nanohana ny fanentanana ihany koa ny mpikambana ao amin'ny delegasionan'ny Vondrona Eoropeana any Myanmar.